Nyowani WhatsApp yekuvandudza inoratidza mabasa atove kuwanikwa | IPhone nhau
Nyowani nyowani ye WhatsApp, nzira dzekare. Isu tanga tichiziva kwenguva yakati kuti zvese kutaurirana kubva kune yakanyanya kushandiswa mameseji kunyorera zvave magumo-kumagumo akanyorwa. Kunyangwe nanhasi ivo zvakare vakaburitsa pane yavo blog kuti isu tinokwanisa kutanga kutumira magwaro eanenge chero mhando, senge Izwi, Excel, Powerpoint kana akajeka zvinyorwa zvemavara. Asi nhasi WhatsApp Inc. yakagadzirisa zvakare mashandisirwo ayo uye zvakare zvinoita sekunge kuti haidi kutsanangura izvo izvo nhau zvinosanganisirwa.
Nhau mameseji akaisirwa muWhatsApp Messenger vhezheni 2.16.2
Yako mameseji, mapikicha, mavhidhiyo, meseji meseji, zvinyorwa, uye mafoni zvave kuchengetedzeka nekuguma-kusvika-kumagumo kunyorera, zvinoreva kuti havagone kuverenga kana kunzwikwa neWhatsApp nevanhu vechitatu. Meseji zvinongoerekana zvaguma-kusvika-kumagumo zvakavharirwa otomatiki; hapana chikonzero chekugadzirisa kana kugadzira dzakasarudzika chats dzekuchengetedza yako mameseji. Kuguma-kumagumo kunyorera muWhatsApp kunowanikwa kana iwe nemunhu wauri kutumira mameseji muchishandisa shanduro dzazvino dzeWhatsApp. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanyira webhusaiti https://www.whatsapp.com/security
Ndeapi mashoko chaiwo kana kuti nei waburitsa iyi vhezheni? Zvinotaridza kunge zvisingaite kuti vakaburitsa chigadziriso kungo taura chimwe chinhu vazhinji vashandisi vaitoziva. Zvakare, kana tikatarisa kumashure tinogona kuona kuti izvo zvazvino nyowani zvese zvaratidza chimwe chinhu icho chataive tanga tichishandisa kwemavhiki mashoma, saka hapana chinoita kuti tifunge kuti vachachinja yavo modus operandi kubva zvino zvichienda mberi. Iye zvino zvava kwatiri kuti tifambe kuburikidza nezvirongwa, nhaurirano uye mamwe maooks echishandiso kuti tione kana tichiwana chero chinhu chitsva icho chaisawanikwa mune yekutanga vhezheni yemessage application iyo yatove kushandiswa nevashandisi bhiriyoni. Pane chawakawana here chitsva? Inzwa wakasununguka kuisiya mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Nyowani WhatsApp yekuvandudza inoratidza mabasa atovepo
Kubvira kutumira magwaro akasiyana neakasiyana mafomati uye mune yepazasi pani muchikamu icho chaidaidzwa kunzi «marongero» izvozvi inonzi «kumisikidza»
Ivo vanofanirwa kugadzirisa iwo typeface nenzira imwecheteyo seyemunongedzo app, zvinoita sekunge kwandiri kuti fomu yazvino haigone
Izvo hazvishande, zvinoita kunge zvinondibatanidza uye hazvindibvumidze kutumira kana kugamuchira meseji fucking yekuvandudza chafa
Ini handizive kana ini ndaive ndiripo kare, kana ini ndakangoziva 🙂 asi ikozvino mukutsvaga, kuwedzera kune vanofambidzana, mhedzisiro yezvinyorwa zvehurukuro zvakare zvinobuda.
Chinhu chega chakashamisa chandinoona ndechekuti ikozvino kana iwe ukatumira meseji isina internet kana dhata uye iwe uchida kuidzima isati yatumirwa, inotumirwa zvakadaro uye inosvika kune mumwe munhu.
Iyo FBI haina chaakawana pane iyo San Bernardino iPhone